Ukuqonda i-Golf Club Shaft Flex
Ukukhetha i-Right Shaft Flex kwiiKlabhu zakho zeGrafu
Ukuqonda i-golf club shaft flex kunokunceda ukuphucula umdlalo wakho wegalufa
Ukuba ufuna ukuphepha ukunika umdlalo wakho umthi, kufuneka uqonde umphumo wokuthi i-shaft flex inomdlalo wakho.
"I-Flex" ibhekisela kwikhono legolfu ukugoba njengokuba kusetshenziswe amandla kuyo ngexesha lokuguquka kwegalufu. Leyo mikhosi iveliswa ngumhlobo wokuguqula unayo - ngokukhawuleza okanye ophuzileyo, ogqithiseleyo okanye ogqithiseleyo.
Kukho ezintlanu eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukulinganisa i-shaft flex: I-Stiff Extra, i-Stiff, rhoqo, iMatriki kunye namaLadies, ngokuqhelekileyo ibonakaliswe yiileta X, S, R, A kunye neL ("A" isetyenziswe kwiMatriki kuba le-flex ebizwa ngokuthi " umtsalane ").
Ukuba ne-flex flexing to match the needs of swing yakho kuya kubangela ukuba i- clubface ibe nefuthe elibi, ebangela ukuba izibhengezo zakho zihambe.
Ziziphi iimpembelelo zeShaft Flex
I-Shaft flex impacts, ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo, ukuchaneka, umkhondo kunye nomgama wempuphu yakho. Izinto ezintathu ezibaluleke kakhulu, eh?
Njengoko i-shaft iguqule yonke i-swing, isikhundla se- clubhead sitshintsha. Kwaye ubuso bobuklabhu kufuneka bube yikwere (ngokuchanekileyo ngokuthe tye) kwimpembelelo yokufumana uninzi lwalo mdlalo. Ukuba unenkqubela ephosakeleyo yokuguquka kwakho, kunethuba elincinane lokuba uya kuqhagamshelana nebhola eneklabhu yesikwere .
Ezinye iziKhokelo eziKhulu malunga neShaft Flex
Iqondo le-flex kwi-shafts yakho yinto olawulayo. Unokukhetha ukuthenga i-shaft shaft, okanye i-shafts encane, kuxhomekeke kwiimfuno zakho.
Kodwa ungayichazela njani into oyifunayo? Nazi izikhokelo eziqhelekileyo:
Khangela ubuso obunokukubetha umqhubi wakho. Oku kuhle, kodwa ngokubanzi, isibonakaliso. Ukuba uhamba nawe umqhubi wamadidi angama-250 okanye ngaphezulu, hamba nge-Stiff; 230-250 iiyadi, rhoqo; 200-230 iiyadi, abaPhezulu; ngaphantsi kweeyadi eziyi-200, Ladies. Yona kuphela inkulu yeentsimbi ezinkulu eziya kufuna i-Extra Stiff. Kwabaninzi bethu, i-Extra Stiff ayikho kumfanekiso.
Ukuba unayo i-swing edibeneyo, unokufumana inzuzo kwi-strap flex even if you swing fast. I-swing ekhwela phezulu-xa ishintshela kwi-downswing-mhlawumbi idinga i-shaft stiffer.
Ukuba iimoto zakho ziyahamba zikhohlo, unokuzuza kwi-flexible stiffer; ukuba iimoto zakho zihamba ngokuchanekileyo, unokufumana inzuzo kwi-strap flex.
Ukuba I-Shaft Yakho Flex Yinzima ...
Yimiphumo yintoni i-shaft enamandla kakhulu kwimidlalo yakho yegalufa?
Ibhola mhlawumbi ihamba ngezantsi kwaye imfutshane kunoma yiphina i- loft enikeziweyo, xa kuthelekiswa ne-shaft efanelekileyo.
Ibhola inokuthi ihambe ukuya ngakwesokudla, okanye i- fade side, kubagaluli begreyithenda elungileyo ngenxa yokuba i-shaft enamandla kakhulu i-clubface iyanzima ukuya kwesikwere (i-clubface iyakwazi ukuvuleka kwimpembelelo, ngamanye amagama).
Idulo lingaziva lincinci, lifana ne-mishit nangona udibanisa kwiziko le-clubface.
Ukuba I-Flex Yakho Ayikho I-Stiff Enough ...
Yintoni eyenzekayo ukuba i-flex yakho ayinzima ngokwaneleyo?
Ibhola inokuthi ibhabhise phezulu kunoma yiphina i-loft enikeziweyo, xa kuthelekiswa ne-shaft efanelekileyo.
Ibhola ingase ihambe ngakwesobunxele, okanye kumgca wokudweba , kwi-golfer efanelekileyo (ngenxa yokuba i-shaft eguquguqukayo kakhulu, i-clubhead ingathatha ukungena kwibhola ivaliwe ).
Amashishini angadla aziva eqina ngakumbi, nangona xa engekho.
Oo, aboMacho Men
Amadoda afana nokubetha iiklabhu zegalufa kunye nama-shaft shafts. Yinto into. Ngelishwa, akusoloko kuyinto ehlakaniphile.
Ayikho indoda efuna ukubonakala ibetha i-wimpy encinane I-flex flex club, okanye, i-Tiger Woods inqatshelwe, iMatriki okanye iLadies flex.
Kodwa ukugqithwa yinkxalabo eqhelekileyo phakathi kwabasemagunyeni abaphezulu.
Ukukhetha i-flexibility flex often has a effect of forceing men to slow down their swings. Kwaye ukucotha i-swing kuvame ukubabangela ukuba amadoda angama-golisa abe gulane.
Yaye inyaniso kukuba, ingozi ekubetheni i-shaft eguquguqukayo kakhulu yinto engaphantsi kokulimala ekubetheni i-shaft enzima kakhulu. Njengoko izixhobo ezinkulu uSolomon Wishon uthe, xa ungaqinisekanga nge-flex, uhlale ulahleka kwicala le-flex flex (intsingiselo, i-shaft encane). Ukuba awukwazi ukugqiba phakathi kwexesha eliqhelekileyo kunye ne-Stiff, hamba rhoqo.
Indlela ekhohlakeleyo yokukhetha i-Shaft Flex
I- clubfitting enegalufa yegalufu yindlela ephakanyisiweyo yokukhetha i-flex flexibility.
Inkqubo iya kuthatha amanqanaba amaninzi, jonga u-swing yakho, ulinganise isivinini sakho sokujika, ubukele ibhola lakho lebhola uze ukwazi ukuphakamisa i-flex efanelekileyo kuwe.
Ii-Clubfittings zifumaneka kwiivenkile ezininzi zepro kunye nazo zonke izikolo zegalufa kunye nabaqeqeshi bokufundisa.
I-clubfitters ezinikezelweyo ziya kuba ziqhelekileyo.
Ukuba i-club-fitting ayikho kwikamva lakho, into elandelayo yinto efanelekileyo yosuku lweedemo . Kwiintsuku zeememo, uya kukwazi ukushaya iintlobo ezahlukeneyo zeeklabhu ezineentlobo ezahlukeneyo zeengqimba. Okanye fumana ivenkile yepro efanelekileyo kunye neendawo zokungena apho unokuzama khona ngaphambi kokuba uthenge.
Isitshixo, esifutshane neklabhu, ukushaya amaqela amaninzi ahlukeneyo kwaye ubukele umphumo wokutshintsha i-shaft flex inakho.
Ukuba ufumana i-flex eyaziwayo kakuhle kwaye ikhiqize ibhola elifanelekileyo lebhola , kukho ithuba elihle lokuba yi-flex flex you.
UCleveland Smart Sole 2.0 Ukuhlaziywa komvuzo
I-GolfMade ye-TaylorMade: Inkcazo yeNkampani
Indlela yokukhetha i-Skis efanelekileyo
Ukuhlaziywa: UkuPhulwa kwePing UViyeli
Konke malunga neCarabiners
I-Scotty Cameron Futura X7, i-X7M kunye ne-X7M ye-Double Balance Putters
Indlela yokwenza iRack Rack Yakho
Iyakwazi ukubhala か, き, く, け, こ Ngezi zikhokelo ezixhasayo nge-Stroke-by-Stroke Guides
Yiyiphi 'Umgca wokunquma' kwiiKhotho zeGolom?
'Que' kunye ne 'De Que' landela iNoun
I-MLB yasePuerto Rican Baseball Players
Iminyaka eyi-50 yezigidi zeNdlovu
Uhlolo lweRobinson Crusoe
Funda NgeMfazwe yeFalklands
UAbraham: UMsunguli wobuYuda
Ngaba Sinokuhamba Ngethuba Elidlulileyo?
Iziganeko ezikhokelela kwiiNqwelo zamaPersi
IiNyuvesi zeNyuvesi yaseNew Mexico
Ukunyuka kweMontréal: Iindaba ezilula zeFrench neesiNgesi ezimbini